रूस 2014 पछि जन्मेको कुनै सुर्ती को बिक्री मा प्रतिबंध लगान सक्छ
व्यवस्था, स्वास्थ्य र सुरक्षा
रूसी नागरिक आधा बारेमा चुरोट आशक्त छन्। तथ्याङ्क अनुसार, देखि लगभग 40 प्रतिशत 143 मिलियन जनसंख्या सुर्ती उत्पादन नियमित प्रयोग गर्नुहोस्। यो बानी को जनसंख्या छुटकारा गर्न, स्वास्थ्य मंत्रालय एक बरु मूल उपाय प्रस्तावित।
धूम्रपान लड्न नयाँ योजना
स्वास्थ्य रूसी मंत्रालय रूसी समाचार वेबसाइट "समाचार" प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार, मा 2015 जन्मेका सबै मान्छे को लागि सुर्ती को बिक्री मा प्रतिबंध लगान नयाँ योजना प्रस्तावित छ। व्यवस्थाको ग्रहण को मामला मा 2033 अघि परिचालन बन्न। यो कहिल्यै धूमपान रूस सबै नागरिकहरु लागि अवैध बन्न सक्छ भन्ने हो।
रूस, धूम्रपान मुकाबला उद्देश्य कसले अधिवेशन निम्न, विशाल कदम सुर्ती उत्पादन को विज्ञापन निषेध र तिनीहरूलाई मा कर वृद्धि गर्न लिइएको छ। साथै, धूम्रपान 2013 देखि सार्वजनिक ठाउँमा निषेधित छ। मास्को मा एक बस स्टप मा गत वर्ष को सुरुमा पनि शब्दहरू एक पोस्टर "धूम्रपान हुनत यो मान्छे धेरै हत्या, ओबामा बढी हत्या।" देखा
पुरानो बानी मान्छे काम गर्न इन्कार हुनत यी प्रयासहरु, धूम्रपान संख्या केही कमी गर्न नेतृत्व गरेका छन्। तथ्याङ्क अझै पनि 15 को उमेर मुनिका बच्चाहरु को 12% हरेक दिन धूम्रपान भनेर भन्छन्। धेरै पनि smokeless veyping गर्न सरेका छन्।
दुनिया मा toughest व्यवस्था
यो व्यवस्था सबैभन्दा संसारमा कडे केही कम्पनी मा हुन सक्छ। भूटान एशिया मा - जहाँ विरोधी धूम्रपान व्यवस्था संसारमा सबैभन्दा कडे सुर्ती, आफ्नो संग्रह, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण र बिक्री को खेती रूपमा मानिन्छ, प्रतिबन्धित को एक देश।
संसारको बाँकी रूपमा,6लाख मान्छे हरेक वर्ष सुर्ती देखि मर्छन्। ती 600 हजार गैर-धूम्रपान छन्, तर तिनीहरू सबै नै सास फेर्न सुर्ती धुवाँ, त्यसपछि त्यहाँ निष्क्रिय धूम्रपान छौं। संसारमा धूम्रपान को असी प्रतिशत जहाँ आय स्तर कम वा औसत देशहरूका बाँचिरहेका छौं।
आवश्यकताहरू निर्देशन द्वारा भेट गर्न आगो सुरक्षा मा
उद्यमी मा रोकथाम उपाय। आगो नियन्त्रण
आगो को खतरनाक कारक: पहिलो स्थानमा खोज्न के?
ठूलो विनाशको हतियार - सम्पूर्ण ग्रह एउटा खतरा
सबैभन्दा खराब दुर्घटना पदयात्रीहरुलाई मुछिएको
कसरी आफ्नो हातले मोती को एक फूल बनाउन
खोपडी: को खोपडी हड्डी को परिसर। प्रकार खोपडी जडानहरू
जहाँ जरुरी आवश्यकता लागि पैसा प्राप्त गर्न?
पानी सुन्दर बयान
दबाइ 'तीन-regolith'। समीक्षा, आवेदन
Polycystic Ovary सिंड्रोम
स्वादिष्ट curd नुस्खा
मह उपचार। विभिन्न रोगबाट लागि मह को प्रयोग। व्यञ्जनहरु र सल्लाह
प्रेम कविता Tiutchev। मनसाय Tyutchev Lyric। कविता
Antiemetics "Ondansetron": प्रयोगको लागि निर्देशन र विवरण